ယူကရိန်းအစိုးရက ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုများ သိမ်းယူရေးကို အတည်ပြု - Xinhua News Agency
ယူကရိန်းနိုင်ငံ ကိဗ်မြို့၌ မီးခိုးများ လွှင့်ပျံနေသည်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိဗ် ၊ မေ ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ယူကရိန်းအစိုးရအဖွဲ့သည် ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုများအား သိမ်းယူရေးကို အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် Denys Shmyhal က မေ ၁၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“ဒီနေ့မှာ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေဟာ ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းက ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ယူကရိန်းနိုင်ငံကို လွှဲပြောင်းဖို့ ဒါမှမဟုတ် “အမျိုးသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ” ထဲကို လွှဲပြောင်းဖို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက တယ်လီဂရမ်ပေါ်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုများအား ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ထားရှိသွားမည် ဖြစ်ပြီး ယူကရိန်းစစ်တပ် အားကောင်းလာရေး ၊ ပြည်သူလူထုအား ထောက်ပံ့ရေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယူကရိန်းအစိုးရသည် နိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခအလွန် ကာလ နလန်ထူရေးအတွက် ရန်ပုံငွေများ အသုံးပြုရန် ပြည်ပရှိရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုများအား သိမ်းဆည်းရန် အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဧပြီလတွင် ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်က ယူကရိန်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ပဋိပက္ခအလွန် နလန်ထူရေး ရန်ပုံငွေရရှိရန်အတွက် ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုများသိမ်းဆည်းခြင်းမှတဆင့် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ပြန်လည် တည်ဆာက်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေဖြည့်တင်းဖို့ ရုရှားအစိုးရနဲ့ ရုရှား ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေရဲ့ ငွေကြေးတွေဟာ အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။”ဟု ၎င်းက တယ်လီဂရမ်ပေါ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Ukrainian gov’t approves seizure of Russian assets: PM
KIEV, May 10 (Xinhua) — The Ukrainian government has approved the seizure of Russian assets in Ukraine, Prime Minister Denys Shmyhal said on Tuesday.
In April, Shmyhal said Kiev sought to seize Russian assets to finance Ukraine’s post-conflict recovery. “The funds of the Russian government and oligarchs will be one of the main sources for filling the Fund for the Reconstruction of our country,” Shmyhal said on Telegram. ■
Photo – Photo taken on Feb. 27, 2022 shows smoke rising in the sky in Kiev, Ukraine. (Xinhua/Lu Jinbo)